Maxaa Siyaad Barre mudada loogu kordhin waayay ee Silaanyo loogu kordhinayaa by Abdi Mustafe‏
Maxaa Siyaad Barre mudada loogu kordhin waayay ee Silaanyo loogu kordhinayaa by Abdi Mustafe‏ 0 July 04, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 1531
Maxaa Siyaad Barre mudada loogu kordhin waayay ee Silaanyo loogu kordhinayaa by Abdi Mustafe‏ Reer
Waqooyigu cadaalada ma yaqaanan. Siyaad Barre maxaa loola dagaalamay ee
Silaanyo loo daystay. Macnuhu ma waxa weeye kani waa isaaq kaasina daarood buu ahaa ileyn Siyaad na Somalia oo dhan burburiyey Silaanyo na Somaliland oo dhan buu burburiyey e. Maan fahmin sababta Silaanyo mudada
loogu kordhiyey iyo wuxuu ku mutaystay oon ahayn shicibka reer Somaliland baa hurdo dheeeeer ku jira oon war iyo wacaalba hayn. Mohamed
Siyad Barre wuxuu lahaa khadija macali iyo Morgan iyo Ghani oo intiiba Silaanyo wuu leeyey. Siyaad barre wuxuu lahaa jariidadii xidigtii October Silaanyo dhow buu leeyey ay mid tahay Danan. Siyaad barre wuxuu ahaa beenaale, khaayin, Tuug, intiiba Silaanyo waa lagu hayaa. Doorashada maalin la iigu dari maayo ayuu shan jeer yidhi iminkana wuu kordhistay, Aqaladii iyo dhulkii iyo lacagtii Dekeda Berbera iyo tii Biyaha Hargiesa lacagtii madaarka intiiba wuu boobay oo xaday, wax safarada uu galo ka soo baxa oo dadka loo sheegaa ma jirto oo waa khaayin nimo qaran. Siyad Bare iyo Silaanyo waxay ku kala duwan yiin ma hayo sidaa darteed dalka ha laga xoreeyo mar labaad diktator kan ku habsaday.
20/04/2017 - 00:08:44